Vula uMkhupheli weVidiyo, i-GUI ye-youtube-dl eyenziwe nge-Electron | Ubunlog
Vula uMkhupheli weVidiyo, i-GUI ye-youtube-dl eyenziwe nge-Electron
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Open Video Downloader okanye i-youtube-dl-gui. Yi le unayo Iplatform ye-GUI ye-youtube-dl eye yadalwa nge-Electron kunye neNode.js. Ngesi sicelo sinokukhuphela iividiyo kunye noluhlu lokudlala kuzo zonke iintlobo zeefomathi, kwiiwebhusayithi ezininzi ezibalulekileyo.
Ukuba awukayazi ukuba yintoni i-youtube-dl, xelela ukuba yinkqubo yomphathi wokhuphelo lomgca womyalelo, esinokukhuphela ngayo iaudio kunye nevidiyo kwiYouTube kunye nobuncinci be-1000 nezinye iiwebhusayithi zokubamba ividiyo. Vula uMkhupheli weVidiyo sisicelo somthombo ovulekileyo esizisa ukusebenza kakuhle kwe-youtube-dl kubasebenzisi abakhetha ukusebenza kujongano lomzobo..
1 Iimpawu eziqhelekileyo zoMdawuli weevidiyo ovulekileyo
2 Khuphela kwaye usebenzise i-Open Video Downloader ku-Ubuntu
2.1 Kusetyenziswa kwanjani
Iimpawu eziqhelekileyo zoMdawuli weevidiyo ovulekileyo
Singayifumana le nkqubo iyafumaneka kwi-GNU / Linux, macOS kunye neWindows.
Yisoftware Umthombo okhululekileyo novulekileyo. Ikhowudi yayo yomthombo iyafumaneka GitHub.
Ngale nkqubo sinokukhuphela iaudio kunye nevidiyo kuzo zonke iimpawu ezikhoyo. Iya kusivumela ukuba sikhuphele iividiyo zabucala, sikhuphele kuphela iaudio okanye uluhlu lokudlala.
Inkqubo iya kusinika ukhetho lwe bonisa ubungakanani obuqikelelweyo bokukhuphela.
Isantya sokukhuphela siyakhawuleza. Nangona oku ndicinga ukuba kuya kuxhomekeka kakhulu kwisantya soqhagamshelo lwe-intanethi.
Esi sicelo sisinika ukukwazi ukukhuphela uluhlu lwevidiyo, kodwa sinokubonisa ividiyo enye kuphela kuluhlu lokukhuphela. Oku kunokwenzeka ukuba uluhlu lokudlala luneevidiyo ezingaphezulu kwama-50. Ngezizathu zokusebenza, isicelo sidibanisa zonke iividiyo zibe nye 'ividiyo yoluhlu lokudlala'.
Ngaphakathi Iyakuvumela ukukhuphela ukuya kuthi ga kwiividiyo ezingama-32 ngolungelelwaniso.
Le software Iya kubonisa imethadatha ehambelana neevidiyo / umculo ukuba sifuna ukukhuphela.
Iya kusivumela ukuba sisebenzise a mnyama okanye omnye umxholo okhanyayo.
Khuphela kuzo zonke iintlobo ze amaqonga: YouTube, vimeo, twitter kunye nabanye.
Xa kugqityiwe ukukhutshelwa iividiyo, Inkqubo iya kusinika ithuba lokuphinda sizivelise kwakhona (ukuba siqwalasela umdlali) okanye uvule ifolda esigcine kuyo.
Nazi ezinye zeempawu zale nkqubo. Banga Nxibelelana nazo zonke ngokweenkcukacha ukusuka kwi Indawo yokugcina iprojekthi yeGitHub.
Khuphela kwaye usebenzise i-Open Video Downloader ku-Ubuntu
Ngaphambi kokuqala, kubalulekile ukuba ifakwe ffmpeg kwinkqubo yethu, kuba ngaphandle kwale nkqubo ukhuphelo aluyi kusebenza. Ukuyifaka, kuya kufuneka sivule kuphela i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye siphumeze umyalelo:
Emva kokugqiba ukufakela, ngoku sinokukhathalela ukukhuphela i-youtube-dl-gui. Le nkqubo iyafumaneka kubasebenzisi be-Gnu / Linux njenge-AppImage. Ifayile inokukhutshelwa usebenzisa isikhangeli sewebhu kwaye uye kwi iphepha lokukhupha iprojekthi. Unokukhuphela uguqulelo lwamva nje lwale nkqubo ngokuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye wenze umyalelo kuyo:
Xa ukhuphelo lugqityiwe, kuya kufuneka nika iimvume zefayile ukubhala lo myalelo:
Okwangoku, sinako sebenzisa lo myalelo ulandelayo kwi-terminal ukuqalisa inkqubo:
Kubalulekile ukuqwalasela iinketho ezongeziweyo kumyalelo wangaphambili, kuba ngaphandle kwabo inkqubo ayiyi kusivumela ukuba sikhuphele iividiyo ngesandi, nokuba iya kukhuphela umsindo kuphela. Indlela ebonisiweyo kulapho iffmpeg igcinwa khona kwikhompyuter yethu.
Ukusetyenziswa kwale nkqubo kulula kakhulu, Ngaphandle kokungena kwiinketho zoqwalaselo inkqubo kufuneka isebenze ngokuchanekileyo.
Emva kokukhuphela kunye nokuqalisa inkqubo, siya kubona ujongano olulula.
Kufuneka nje coma ikhonkco kwividiyo okanye kwiaudio esifuna ukuyikhuphela, kwibhokisi ebekwe phezulu kujongano.
Emva koko kuya kufuneka linda isicelo ukuqokelela yonke imetadata eyimfuneko.
Xa isicelo sinayo yonke idatha efunekayo ekhoyo, sinako cofa inketho yokukhuphela, kwaye iividiyo ziya kukhutshelwa kwifolda yethu yokukhuphela, esinokuyikhetha kwiinketho zenkqubo.
Njengoko kubonisiwe kwi Indawo yokugcina izinto zeGitHub, Vula uMkhupheli weVidiyo kwaye abagcini bayo abanaxanduva lokusetyenziswa kakubi kwesi sicelo, njengoko kusekwe kwilayisensi ye-AGPL-3.0. Ngolwazi oluthe kratya malunga nale projekthi, abasebenzisi banako ndwendwela iphepha lewebhu okanye Iprojekthi Wiki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Vula uMkhupheli weVidiyo, i-GUI ye-youtube-dl eyenziwe nge-Electron
I-GNOME ikhupha izinto ezininzi ezintsha, kubandakanya ukuphuculwa kweMutter kunye nePhosh
IMozilla ibambisene neMarkup ukufumanisa ukuba iMeta ibalandela njani abantu kwiwebhu iphela